शिलान्यास – Himalaya Television
एकैपटक १६५ वटा सडक शिलान्यासको संसदमा यस्तो विरोध, रेडबुक नै शिलान्यास गर्न सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ चैत २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डीपीआरबिना नै १ सय ६५ वटा सडकको शिलान्यास गरेकोमा विरोध गरेको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसको विरोध गरेको हो । शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले प्रधानमन्त्री केपी...
एकै पटक १ सय ६५ वटा सडकको शिलान्यास, निर्माण कहिले ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२१ चैत २०७७ काठमाडौं । आफ्नै कारणले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला देशमा राजनीतिक संकटलाई भुलेर उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यसै क्रममा उहाँले बालुवाटारबाटै १ सय ६५ वटा सडक आयोजनाको शिलान्याश गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले...
१६ फागुन २०७७ काठमाडौं । दर्जनौं उद्घाटन् र शिल्यान्यास गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गृह जिल्ला झापा जाँदै हुनुहुन्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजन भएपछि ओली पहिलो पटक झापा जान लाग्नु भएको हो ।...
औद्याेगिक क्षेत्र धमाधम शिलान्यास हुँदै, निर्माण कहिले ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१० फागुन २०७७ काठमाडौं । यसअघि नै घोषणा भएका तथा कतिपय शिलान्यास समेत भइसकेका औद्योगीक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउन थालिएको छ । आज सुदूरपश्चिमको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको छ भने अन्य चार वटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका लागि...
आज एकैदिन देशभर ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरिँदै
१५ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । आज देशभर एकैपटक ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल र सातवटै प्रदेशमा एक–एक सरुवारोग अस्पतालको शिलान्यास गरिँदैछ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा...
२५ वर्षअघि शुरु भएकाे आयाेजना अहिले शिलान्यास ! (भिडियोसहित)
११ मंसिर, २०७७ बुटवल । बुटवलमा खानेपानीका लागि २५ वर्षअघि सुरु गरिएको एउटा आयोजना अहिलेसम्म पुरा हुनु त कता बल्ल शिलान्यास हुँदैछ । २०५२–०५३ सालमा पाल्पाको झुम्सास्थित सिस्ने खोलाको पानी बुटवल ल्याउन आयोजना सुरु भएको थियो । यो आयोजना...